स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन यसरी काम गर्दैछन् अस्पतालहरू – Health Post Nepal
स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन यसरी काम गर्दैछन् अस्पतालहरू
२०७७ जेठ ११ गते ११:१०
जोखिमभत्ता माग गर्दा स्वास्थ्यकर्मी प्रकाउ
राजधानीका ठूला अस्पतालमै छैन पिपिई, डाक्टरको प्रश्न– चिकित्सकीय धर्म हेरौं कि आफ्नै सुरक्षा?
सेती नदीमा दुई स्वास्थ्यकर्मी बेपत्ता, एकको उद्धार
झनझन् थपिँदै स्वास्थ्य जनशक्तिमाथि ‘संकट’, संगठन बाेल्दैन, सरकार केही गर्दैन
नेपालमा कोरोनाको कहर बढ्दै जाँदा अग्रमोर्चामा खटिने चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुन थालेका छन्। १० दिनमात्रै देशभरका २ चिकित्सक, ६ नर्स र ३ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमितको पुष्टि भइसकेको छ।
अस्पतालहरूले स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगिनका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाउन थालेका छन्। नेपालमा १० दिनयता संक्रमण दर ह्वातै बढेको छ। संक्रमण बढ्दै गएसँगै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सलंग्न हुने स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रिमत हुन पुगेका हुन्।
अधिकांस कोरोना संक्रमित लक्षणविहीन अर्थात सामान्य अवस्थामा नै रहेका छन्। कोरोना संक्रमणको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमणबाट जोगिन अस्पतालहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्।
कोसी ‘कोभिड १९’ अस्पताल : संक्रमण स्वास्थ्यकर्मी नै अन्य संक्रमितको हेरचाहमा
व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई) बिना कोसी ‘कोभिड १९’ अस्पतालले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिएको छैन। प्रत्येक आइसोलेसन कक्षमा सिसी क्यामरा जडान गरिएको छ।
चौबिसै घण्टा स्वास्थ्यकर्मी सिसी क्यामराबाट बिरामीको निगरानी गरिएको अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर संगीता मिश्र बताउँछिन्। ‘स्वास्थ्यकर्मीले छुट्टै बाहिरी कक्षबाट सिसी क्यामराबाट निगरानी गरिरहनुभएको हुन्छ,’ डा. मिश्रले भनिन्, ‘केही समस्या आइहालेमा एकजना स्वास्थ्यकर्मी पिपिई लगाएर तयारी अवस्थामा रहनुहुन्छ।’
स्वास्थ्यकर्मीको ड्युटी लिस्ट बनाएर, दैनिक कस्ले कतिचोटि राउन्ड गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सकेसम्म संक्रमित व्यक्तिबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण नसरोस् भनेर सामजिक दूरी अपनाउने गरिएको डा. मिश्रको भनाइ छ। संक्रमित बिरामीलाई केही समस्या भने सम्पर्कमा आउनका लागि फोनको व्यवस्था गरिएको छ। समय–समयमा स्वास्थ्यकर्मी र संक्रमित व्यक्तिबीच सम्पर्क भइरहन्छ।
धरान अस्पतालका संक्रमित चार स्वास्थ्यकर्मी अहिले कोसीमा उपचारतरत छन्। २ नर्स र २ पारामेडिक्सले अन्य संक्रमित व्यक्तिको समेत हेरचाह गरिरहेका छन्। केही संक्रमित व्यक्तिलाई आइबी एन्टिबायोटिक दिनुपर्ने अवस्था रहेको डा. मिश्रले बताइन्। तर, अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई थप जोखिममा पर्न दिँदैनन् संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले। औषधी कति दिने, कुन बेलामा दिने सबै संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले हेरचाह गरिरहेका हुन्छन्।
‘स्वास्थ्यकर्मीले भन्ने गरेका छन्, सामान्य कामको लागि तपाईहरू किन जोखिममा पर्न चाहनुहुन्छ। केही समस्या परेमा हामी बोलाउँछौं,’ डा. मिश्रले भनिन्, ‘उहाँहरूले आफंै संक्रमित भएर पनि अन्य बिरामीको हेरचाह गरिरहनुभएको छ।’
टेकु शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल : रोबर्टबाट संक्रमितलाई खाना र औषधी
स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण नहोस् भनेर पूर्ण सावधानी अपनाएर काम गरिएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारी बताउँछन्।
नेपालमा अन्य अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमण देखिएता पनि टेकु अस्पतालमा सावधाधी अपनाएकै कारण अस्पतालमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना पोजेटिभ नभएको भण्डारीको भनाइ छ।
संक्रमित बिरामीलाई निगरानीका लागि सिसी क्यामरा जडान गरिएको छ। हाल अस्पतालमा ३० वडा आइसोलेसन बेड छन्। त्यसमध्ये स्पेसल ५ आइसोलेसन बेड छन्। जसमा १ आइसोलेसन कक्षमा १ बाथरुमको व्यवस्था गरिएको छ।
रोबर्ट प्रविधिबाट संक्रमित व्यक्तिलाई खाना र औषधीको पुर्याउने काम हुन्छ। ‘हामी चाहन्छौं, संक्रमित बिरामीसँग स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्क कम होस्,’ डा. भण्डारीले भने, ‘ संक्रमणको जोखिमबाट बच्न विभिन्न उपाय अबलम्ब गर्ने गरेका छौं।’
संक्रमित बिरामीमा एक्लोपन महसुस नहोस् भनेर चिकित्सकले अनलाइनमार्फत साइकोलोजी काउन्सिल पनि दिने काम भइरहेको छ।
समय–समयमा स्वास्थ्यकर्मी र संक्रमितबीचमा फोनबाट सम्पर्क भइरहने डा. भण्डारीले बताए। ‘संक्रमित बिरामीलाई एक्लो महसुस हुन नदिनका लागि वाईफाईको व्यवस्था गरेका छौं,’ डा. भण्डारीले भने, ‘सामाजिक सञ्जालबाट संक्रमितले आफ्नो परिवारसँग कुराकानी गर्ने गरेका छन्।’
डा. भण्डारीका अनुसार अस्पतालले प्रत्येक बिरामीलाई विपी सेट र अक्सिजनको मात्रा नाप्ने मेसिन दिएको छ। संक्रमणलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकाएका छौं। जसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीले स–साना कामका लागि संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जानुपर्दैन । बिरामीले यस्ता स–सना काम गर्दा स्वास्थ्यकर्मीलाई थप जोखिम हुँदैन।
नारायणी अस्पताल : संक्रमित आफैंले रक्तचाप, ज्वरो नाप्छन्
अन्य अस्पतालको जस्तै नारायणी अस्पतालमा पनि संक्रमित बिरामीहरू चौबिसै घण्टा नै सिसिटिभीको निगरानी हुने गरेका छन्।
अस्पतालले संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि केही प्रोटोकल तय गरेको छ। हाल नारायणी अस्पतालमा ७२ जना र नारायणीकै मातहातमा रहेको गण्डक अस्पतालमा ३२ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ।
आइसोलेसन वार्डमा बिरामीलाई राख्नका लागि आल्मुनियमले पाटेसन गरिएको छ। संक्रमित बिरामीसँग स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष सम्पर्क कम गर्नेका लागि विभिन्न प्रविधिको प्रयोग भइरहेको अस्पतालका मेसु डा. मदन उपाध्याय बताउँछन्।
उनका अनुसार बिरामीको श्वासप्रश्वास तथा मुटुको धड्कन जाँच्नका लागि त्यही पाटेसनको बाहिरबाट स्टेथस्कोपको व्यवस्थापन गरिएको छ।
‘चिकित्सक तथा नर्स बाहिरबाटै एयरपिस राखेर भित्र रहेका बिरामीलाई माइकको आधारमा स्टेथस्कोप कहाँ राख्ने भनेर बुझाउँछौं र उहाँहरूले आफैंले चेकजाँच गर्नुहुन्छ,’ डा. उपाध्यायले भने, ‘यस्तो प्रविधिको कारणले बिरामीको स्वास्थ्यजाँच पनि सहज रूपमा भयो भने बिरामीसँग दूरी पनि कायम रहन सक्छ।’
सबै संक्रमित बिरामीलाई डिजिटल फारम भर्न दिने गरिएको छ। जसमा बिरामी आफैंले दैनिक ज्वरोमापन विवरण भर्ने गरेका छन्।
संक्रमित बिरामीहरूको पनि फोनको माध्यमबाट स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्पर्क हुने गरेको छ।
‘कोरोनामा सम्पर्क दूरी जतिसक्दो कम गर्न पायौं, त्यति नै राम्रो हुन्छ। एकमात्र स्वास्थ्यकर्मीमा पोजेटिभ केस देखियो भने हामीले पूरै अस्पताललाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ डा. उपाध्यायले भने, ‘बिरामीको हेर्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि यस्ता सुरक्षाकवज व्यवस्था गरेका हौं।’
बुटबल धागो कारखाना ‘कोभिड १९’ अस्पताल : फोनमार्फत संक्रमितलाई सल्लाह
बुटवलको धागो कारखानामा बनाइएको कोरोना विशेष अस्पतालमा ३६ जना कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार भइरहेको छ। अस्पतालमा ३६ आइसोलेसन बेड छ, सबै संक्रमितले भरिएका छन्। उक्त अस्पतालमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको जनशक्तिले काम गरिरहेको छ।
संक्रमित सबैको अवस्था सामान्य रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका फोकल पर्सन डा. सुर्दशन थापाले बताए। अन्य अस्पतालको जस्तै, अस्थायी कोरोना अस्पतालमा सिसी क्यामरामार्फत बिरामीको निगरानी गरिएको हुन्छ।
‘स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क कम गर्नेका लागि अस्पतालले प्रत्येक बिरामीलाई विपी सेट र अक्सिजनको मात्रा नाप्ने मेसिन दिएको छ,’ डा. थापाले भने, ‘उहाँहरू (संक्रमित बिरामी) ले फोनमार्फत हामीलाई रिपोर्ट उपलब्ध गराउनुहुन्छ, जसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम केही हदसम्म भए पनि कम हुन्छ।’
बिरामीको हेरचाहमा एक साताका लागि २० जना स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गरिएको छ। एक साताको ड्युटी सकेपछि दुई सातालाई क्वारेन्टाइनमा जाने गरेको डा. थापाले बताए।
कुनै बिरामी आइसियुमा राख्नुपरेको अवस्थामा जनशक्ति अभाव हुने उनको भनाइ छ।
Tags: कोरोनाको कहर, पुष्पराज चौलागाईं, स्वास्थ्यकर्मी
कोरोना जितेका स्वास्थ्यकर्मी भन्छन् : संक्रमितलाई दुर्व्यवहार होइन सहानुभूति चाहिन्छ
झापामा कोरोना संक्रमणबाट एक वृद्धकाे मृत्यु
सुदूरपश्चिमका ८६ संक्रमितले कोरोना संक्रमण जिते